/ Maitiro ekugadzira nzira pfupi (alias) pane Mac | Ndinobva mac
Kugadzira alias yekushandisa, dhairekitori kana Mac faira inotipa iyo nzira iri nyore yekuwana icho chinhu pasina kuenda kunzvimbo yayo yekutanga. Panzvimbo iyoyo, isu tinokwanisa kugadzira alias chero kupi uye ichamhanya kana kuvhura iyo yekutanga chinhu ipapo, nepo iyo yekutanga faira kana kunyorera kuchiri munzvimbo yayo. An alias muMac anoshanda nenzira yakafanana nemabatiro anoita nzira pfupi muWindows uye tinogona kuiisa chero paMac yedu. mumakore achangopfuura ivo vakatsiviwa neSpotlight, Launchpad uye iyo Dock.
Muchikamu chino tiri kuzokuratidza maitiro ekugadzira yakananga kuwana kune chero faira, dhairekodhi, gwaro kana kunyorera. Chekutanga pane zvese, ramba uchifunga kuti mapfupi mu macOS anonzi maAliases, saka zvinogona kunge iwe wakambotsvaga sarudzo iyi uye hauna kuiwana mune yese system. Uye zvakare, iyo nzira yekuzvigadzira uye nenzvimbo yavakagadzirwa zvinosiya zvakawanda kudikanwa, zvakapesana chaizvo nezvinoitika nechero vhezheni yeWindows.
Gadzira mapfupi paMac
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuenda kunzvimbo yefaira kubva kwatinoda kugadzira yakananga kuwana kana iko iko kunyorera kubva kwatinoda kuigadzira iko.
Ipapo isu tinoenda kune iyo faira kana kunyorera mune mubvunzo uye tinya pane kurudyi bhatani.
Mukati memenu yemamiriro ekuratidzwa isu tinofanirwa kusarudza Gadzira Aliases.
Mune iyo imwecheteyo folda uko magwaro kana kunyorera kwatinoda kugadzira mapfupi aripo, chiratidzo chefaira kana chishandiso chinoratidzwa nemuseve unobva kukona yekurudyi yekona kuenda kukona yekurudyi yekona.
Iye zvino isu tinongofanirwa kufambisa iyo yakananga kuwana / alias kune kwatinoda kuiwana kuti tikwanise kuiwana nekukurumidza tisinga fambe pakati pezvakanyorwa pane Mac yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzira nzira pfupi (alias) pane Mac
Apple inoenderera ichitengesa memory uye processor muMacBook Pro 2017